Raila Odinga oo ku dhawaaqay inuu doorashada ku celiska ah iskaga haray
arlaadi October 10, 2017 No Comments
Hogaamiyaha Isbaheysiga NASA Raila Odinga ayaa waxa uu shir jaraa’id ku qabtay magaalada Nairobi isaga oo ku dhawaaqay inuu iskaga haray doorashada ku celiska ah ee lagu wado inay ka dhacday dalka Kenya 26ka bishaan Oktoober.
Maxkamada sare ee dalka Kenya ayaa baa bi’isay natiijadii kasoo baxday doorashadii ka dhacday dalka Kenya ee uu ku guuleystay madaxweyne Uhuru Kenyatta ayada oo amar ku bixisay in mudo bil gudaheed ah doorasho lagu qabto taasoo ku aadan 26ka bishaan Oktoober.
Raila Odinga waxa uu sheegay in la hareer maray hanaankii ay maxkamada sare amartay in loo qabto doorashada ku celiska ah islamarkaasna laga diiday in meesha laga saaro xubno ka mid ah guddiga doorashada oo ay ku eedeeyeen inay masuul ka ahaayeen in madaxweyne Uhuru Kenyatta loogu shubo doorashada.
Mr Odinga iyo kuxigeenkiisa Klonzo Musyoka ayaa si wada jir ah shirka jaraa’id u qabtay sheegayna inuusan midkoodna ka qaybgeli doonin doorashada 26ka bishaan dhaceyso.
Raila waxa uu ku eedeeyay gudigga madaxa banaan ee doorashooyinka iyo xaduudaha Kenya IEBC inay dhegaha ka fureysteen tabashooyinkooda isla markaasna aysan ka fileynin inay doorasho xor ah qabtaan.